Mumwe Kanzura weMasvingo Okumbira Kuti Mumwe Mugwagwa muGuta Iri Upihwe Zita raVaMorgan Tsvangirai
Chivabvu 18, 2018
Mumwe kanzura weMDC inotungamirwa naVaNelson Chamisa muguta reMasvingo, VaGodfrey Kurauone, vakasvitsa svondo rino zviri pamutemo chikumbiro kukanzuru yavo chekuti idome mumwe mugwagwa weguta iri zita rekuti Morgan Richard Tsvangirai, senzira yekurangarira mabasa akaitwa namushakabvu.
VaKurauone vanoti vakaona zvakakodzera kuisa chikumbiro ichi, asi havasi kufara nedanho rekomiti yekanzuru inoona nezvehutano nedzimba iyo inoda kukwidza nyaya iyi kudare remakurukota.
Vanoti mutemo weUrban Council Act, Chapter 29:15 unovapa simba rekutumidza migwagwa mazita pasina kuenda kudare remakurukota enyika, nokudaro vanoti inzira yemakanzura ari kupikisa anoda kuti zvisaite kana kuti zvinonoke.
Sachigaro wekomiti iyi, uye vari nhengo yeZanu PF, VaGashia Mundondo, vakaramba kutaura nezvenyaya iyi vachiti vachataura kana yapera kuzeyiwa nemusangano mukuru uchaitwa kupera kwemwedzi uno.
Aka hakasi kekutanga nyaya iyi ichikurukurwa mudare rekanzuru sezvo yakatsviriridza svondo rapera apo kanzuru yeMasvingo yakaita musangano wayo mukuru wekuzeya zvakaitika muna Kubvumbi.
Pakaita makatanwa pakati penhengo dzeZanu PF nedze MDC-T pakataurwa nyaya iyi kusvika nhengo dzekanzuru dzawirirana kuti chikumbiro ichi chiiswe pamberi pekanzuru zviri pamutemo.
Izvi ndizvo zvakapa kuti VaKurauone vapinze nyaya iyi mudare zviri pamutemo, kuburikidza nekunyorera kukomiti yedzimba tsamba.
Muzvare Cecelia Mundondo ndemumwe ari kutsigira makanzura eZanu PF kuramba kuti mugwagwa uyu utumidzwe zita ra VaTsvangirai. Vanoti VaTsvangirai harisi gamba renyika.
Asi Muzvare Gina Mutero vanoti danho ratorwa naVaKurauone rakanaka nekuti VaTsvangirai vakaita basa guru munyika rekurwira hutongi hwejekerere nekodzero dzevanhu.
Mukanzuru yeMasvingo mune makanzura gumi, matanhatu ari eMDC-T mana ari eZanu PF.
VaKurauone vanoti vanotarisira kuti kana zvaomesesa vanotarisira kupikisa pfungwa yekuendesa nyaya iyi kudare remakurukota, vovhotera kuti ipedzerwe mukanzuru sezvo bato ravo riine makanzura akawanda kudarika e Zanu PF.
Kana chikumbiro ichi chikabudirira, dhorobha reMasvingo richaita guta rekutanga kuva nemugwagwa wakatumidzwa zita remutungamiri webato rinopikisa uye asina kurwa muhondo yeChimurenga.
Asi Masvingo harisi iro guta rega riri kuda kuti mugwagwa waro upihwe zita raVaTsvangirai.
Guta reHarare rakawiriranawo muna Kurume kuti guta iri ritumidze mumwe mugwagwa zita raVaTsvangirai, mushure mechikumbiro chakaitwa naVaPeter Moyo, kanzura weSoutherton.
Izvi zvakaitikawo mwedzi wapera kwaMutare uko kanzuru yekuguta iri yakabvumawo kupa zita raVaTsvangirai kumugwagwa.